အောင်သောင်း၊ ဦး - ဝီကီပီးဒီးယား
၃၀ မတ် ၂၀၁၁ – ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၅
စက်မှု ၁ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး
၁၉၉၆ – ၁၉၉၇
၁၉၉၃ – ၁၉၉၆
(1940-12-01)၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၄၀
ဝဲလောင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၅(2015-07-23) (အသက် ၇၄)[note ၁]
ဦးအောင်သောင်း (၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၄၀[note ၁] - ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၅) သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တောင်သာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရသည်။
၂ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ရာထူးများ
ဦးအောင်သောင်းကို ၁၉၄၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ ကျောက်ကာရွာ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ (အင်္ဂလိပ်တော်လှန်တဲ့ မြင်းခေါင်း ဗိုလ်ရာညွန်ဇာတိ ကျောက်ကာနဲ့ ကပ်ရက်) ဝဲလောင်ရွာ ဇာတိဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သူ့အား ဝဲလောင်သားဟု မကြာခဏ ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဇနီးမှာ ဒေါ်ခင်ခင်ရီဖြစ်သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ကျောင်းဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ပင် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကုန်သွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်တွင် နှစ်များစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် စက်မှု ၁ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အဖြစ် မပြောင်းလဲမီ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း တွင်လည်း ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သေးသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်သောင်းအား ပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ၁ အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
တောင်သာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ (၄) တန်းအောင် အရည်အချင်းရှိလျှင်ပင် လုပ်ကိုင်၍ရကြောင်း၊ ရှေးက ဘုရားပုထိုးများ စနစ်တကျ တည်နိုင်ခဲ့သည့် အနော်ရထာဘုရင်သည် မည်သည့် တက္ကသိုလ်မှ တက်ခဲ့သူမဟုတ်ကြောင်း နေပြည်တော် စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ပြောခဲ့ဖူးသည်။ နေပြည်တော် စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများ တက်ရောက်သည့် နေပြည်တော် သင်တန်းဖွင့်ပွဲတခုတွင် ယခုကဲ့သို့ ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးအောင်သောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် ဖြစ်လာပြီး ၎င်း၏မိသားစုဝင်များက အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီ၊ အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီနှင့် ကွင်းစတားကုမ္ပဏီများကို ဦးစီးလုပ်ကိုင် လျှက် ရှိသည်။ ယင်းကုမ္ပဏီများသည် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သစ်နှင့်ဆန်စပါးရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် တခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနေသည်။ အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီသည် စင်ကာပူတွင်လည်း 'IGE' ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီကို ဖွင့်ထားသေးသည်။
၂၀ဝ၃ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ခဲ့ သူအဖြစ် ဦးအောင်သောင်းကို ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံများက စွပ်စွဲပြောနေဆိုခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်သောင်းသည် ရုတ်တရက်လေဖြတ်ကာ လဲကျခဲ့သဖြင့် နေပြည်တော် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်မှ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ရောက်ရှိလာကာ ကုသသော်လည်း မသက်သာသဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သယ်ဆောင်ကာ ကုသခဲ့ကြသည်။
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ၂ ပတ်ကြာ ကုသခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ယင်းနေ့မှာပင် သူ၏ ရုပ်အလောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ The Irrawaddy Magazine gives 1 December 1940 as his birth date (from his official passport), and if so, he died at the age of 75 (or 76 per East Asian age reckoning). But the obituary announcement by the family in local newspapers Myanmar Alin and Kyemon mentions that he died at the age of 79.
↑ Announcement of Treasury Sanctions Against Aung Thaung။
↑ Mandalay Division။ Alternative Asean Network on Burma။ 29 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ye Mon။ "USDP lawmaker dies in Singapore"၊ Myanmar Times၊ 24 July 2015။ 25 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Wai Moe။ "U Aung Thaung, Burmese Politician Accused of Abuses, Dies at 74"၊ New York Times၊ 23 July 2015။ 25 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Aung Zaw။ "Aung Thaung: Burma’s Untouchable Minister"၊ The Irrawaddy၊ June 2007။ 29 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Lower House speaker Thura Shwe Mann appointed USDP chairman"၊ Mizzima News၊ 10 May 2011။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Shwe Yee Saw Myint။ "U Aung Thaung unlikely to recover from injury: doctor"၊ Myanmar Times၊ 10 July 2015။ 11 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Way Moe and Austin Ramzy။ "U Aung Thaung, Burmese Politician Accused of Abuses, Dies at 74"၊ 24 July 2015။ 24 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောင်သောင်း၊_ဦး&oldid=528958" မှ ရယူရန်
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။